Difference between revisions of "DLC Information (Future Tone)" - Project DIVA Wiki
Difference between revisions of "DLC Information (Future Tone)"
Revision as of 03:02, 30 October 2019 (view source)
Revision as of 03:14, 30 October 2019 (view source)
m (reformatting + additional info on EXTRA encore (DX) pack)
== 1st Encore Pack ==
=DLC Information (Future Tone)=
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Ageage Again (Music & Lyrics by Mitchie M)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">shake it! (Music & Lyrics by emon)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Cendrillon (Music by Dios / SignalP, Lyrics by orange)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Adolescence (Music by Dios / SignalP, Lyrics by orange)</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Modules</span>===
==<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Modules</span>==
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Ageage Again</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">M.S.J (for Kasane Teto)</span>
=== <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Accessories</span>===
====<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Head</span>====
==<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Accessories</span>==
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Head</span>===
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Bird's Nest</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Tako Luka</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Shiteyan'yo</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Face</span>===
====<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Face</span>====
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Fox Mask</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Beak</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Anonymizer</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Chest</span>===
====<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Chest</span>====
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Harmonica</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Silver Medal</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Bronze Medal</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Back</span>===
====<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Back</span>====
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Mechanical Wings</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Big Red Button</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">EXTRA EXTREME Charts</span>===
==<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">EXTRA EXTREME Charts</span>==
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">I'm Your Diva</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">maigo life</span>
== 2nd Encore Pack ==
'''<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Release date: 2017-03-09 (JP) / 2017-04-07 (EU/US)</span><br /><span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Price: ￥1 500 / $9.99 / £7.99</span>'''
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Skeleton Orchestra & Lilia (Music & Lyrics by Tohma)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Your Body Temperature (Music & Lyrics by Kuwagata-P)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">LOL -lots of laugh- (Music by KeN, Lyrics by Endcape)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Hand in Hand (Music & Lyrics by kz)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Farewell</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Megurine Luka Swimwear Tan</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Kitty Ears Hoodie</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Rosa Blue</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">MEIKO Swimwear Tan</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Wooly Wear</span>
=== <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Accessories</span> ===
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Yurei Headband</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Ram Horns</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Devil's Head Wings</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Oversized Glasses</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Beginner Badge</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Dinosaur Tail</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Nekomata Tails</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Love-Colored Ward</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Master of Puppets</span>
== 3rd Encore Pack ==
<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Release date: 2017-03-09 (JP) / 2017-04-07 (EU/US)</span><br /> <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Price: ￥1 500 / $9.99 / £7.99</span><br /> <br />
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Piano x Forte x Scandal (Music & Lyrics by OSTER project)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Hibikase (Music by Giga, Lyrics by Reol)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Amatsu Kitsune (Music & Lyrics by Marasy)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">1925 (Music & Lyrics by T-POCKET, Manipulated by Oreginal-P)</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Phantom Thief Miku</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Conductor Sky</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Pyjama Party KAITO</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Conductor Crimson Wine</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Pyjama Party MEIKO</span>
===<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Accessories</span>===
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Steaming Mad</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Smiling Snowman Head</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Overhead Heart</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Fake Moustache</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Fake Mustache</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Green Bib</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Heart</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Broken Heart</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Nine Fox Tails</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Dangling Cat</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Schoolbag</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Colorful x Melody</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Nekomimi Archive</span>
* <span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Black Gold</span>
== EXTRA Encore Pack ==
</div>'''<span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Release date: 2017-03-09 (JP) / 2017-12-14 (EU/US)</span><br /><span style="font-family: Arial,Gadget,sans-serif; font-size: 100%">Price: $7.99</span>'''
* Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku
* Ghost Rule
Revision as of 03:14, 30 October 2019
1 1st Encore Pack
1.3 EXTRA EXTREME Charts
2 2nd Encore Pack
2.4 EXTRA EXTREME Charts
3 3rd Encore Pack
3.3 EXTRA EXTREME Charts
4 EXTRA Encore Pack
Cendrillon (Music by Dios / SignalP, Lyrics by orange)
Adolescence (Music by Dios / SignalP, Lyrics by orange)
M.S.J (for Kasane Teto)
V0iCE -DIVA MIX-
Release date: 2017-03-09 (JP) / 2017-04-07 (EU/US)
Price: ￥1 500 / $9.99 / £7.99
Skeleton Orchestra & Lilia (Music & Lyrics by Tohma)
Your Body Temperature (Music & Lyrics by Kuwagata-P)
LOL -lots of laugh- (Music by KeN, Lyrics by Endcape)
Devil's Head Wings
3rd Encore Pack
Piano x Forte x Scandal (Music & Lyrics by OSTER project)
Hibikase (Music by Giga, Lyrics by Reol)
1925 (Music & Lyrics by T-POCKET, Manipulated by Oreginal-P)
Pyjama Party Miku
Pyjama Party Rin
Pyjama Party Len
Pyjama Party Luka
Pyjama Party KAITO
Pyjama Party MEIKO
EXTRA Encore Pack
Release date: 2017-03-09 (JP) / 2017-12-14 (EU/US)
Retrieved from "https://projectdiva.wiki/w/index.php?title=DLC_Information_(Future_Tone)&oldid=105"